Afhayeenka TPLF oo sheegay in weerarada lagu soo qaaday ay ihiin “duqeymo cirka oo ay fulinayaan drone iyo madaafiicda artillariga. | Dayniile.com
Home Warkii Afhayeenka TPLF oo sheegay in weerarada lagu soo qaaday ay ihiin “duqeymo...
Afhayeenka TPLF oo sheegay in weerarada lagu soo qaaday ay ihiin “duqeymo cirka oo ay fulinayaan drone iyo madaafiicda artillariga.
Ciidamada dowladda federaalka Ethiopia iyo xulufadooda ayaa billaabay weerar cir iyo dhul ah oo ay ku qaadayaan gobolka Amhara, oo qeybo ka mid ah ay haystaan ciidamada Tigray-ga.
Previous articleFaysal Cali Waraabe “ Muwaadiniinta Somaliland waa dadkii lixdankii iyo wixii ka horeeyay daganaa, horta, Walawayntu taa ha ogaato
Next articleDeegaan ka mid ah Koonfur Galbeed oo ku biiray Dowlada Etoobiya
Ururka Ahlusunna ayaa isaga baxay degaanka Ceeldheere oo u dhexeeya magaalooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb. Ciidamada dowladda Federaalka iyo kuwa Galmudug ayaa la wareegay deegaanka Ceeldheere...